Ngokuqinisekile wonke umuntu okungenani kanye wacabanga yini ukuthi ukushintsha indlu yakho noma indawo mayelana design and design ingaphakathi, turning ekhaya ku iphupho lakho ekhaya. Uma nje kokuba umakhi wasebenzisa izindlela, ngesimo iphepha, sikelo, ke ezingokoqobo namuhla akuvumela ukuba afeze yonke le nqubo kusheshe futhi kube lula kakhulu.
Izinhlelo umklamo kwezindlu Interiors ukusiza kahle impela futhi, okubaluleke kakhulu, dlulisa ngokucacile design umklami sika, owawusekelwe esikrinini yonke imininingwane nemininingwane emincane.
Ukusebenzisa lolu hlobo software, ungakwazi kalula ukhethe Uphahla lwangaphakathi ezifanele, kahle uhlele ifenisha kanye nezinye izinto zasekhaya ukuklama ukukhanyisa kwesokudla nama-engeli ukubheka indalo yakhe esithombeni ngakuthathu.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi isimiso design elingaphakathi design kungabi nesidingo abaklami abaningi ikhono ukudweba - lokusebenza uzokwenza konke wena. Into kuphela okudingayo - iyona umcabango kanye nebangani.
Ake sicabangele izimpendulo zemibuzo isofthiwe kudingekile kakhulu futhi ethandwa kokubili emibuthanweni professional kanye phakathi abalandeli, zifiki, kucatshangelwa imibono lochwepheshe kanye nabasebenzisi abavamile ukubuyekezwa.
Lolu hlelo ngoba design ingaphakathi libhekisela esigabeni okhokhelwayo. Inhloso Its main iwukuba ukumodeliswa ngakuthathu ukwenziwa Kwezithombe Ezinyakazayo. Ngemva amaziyo obuphelele ngesofthiwe, ungakwazi kalula shift isikhala design esikrinini.
Ngenxa-plugin abaningi ukuthi avuselelwa njalo, ungakwazi ukwandisa kakhulu amakhono hlelo, unezela ukuthungwa uvolo, izingubo nokunye okuningi.
Ochwepheshe wakhuluma ngokufudumele 3D-MAX, ngenkathi abalandeli akhononde obuthile ekuthuthukisweni yayo, kodwa ambalwa nobusuku obungamashumi ezengeziwe Usizo Page kuzokuvumela kabusha iphupho lakho kubo bonke ubuhle balo.
"U-Archie" - lokhu kungahle uhlelo kangcono ingaphakathi design abaklami imvelo. Anqoba ngayo umdwebo kanye ukumodeliswa kwanoma iyiphi isici kwezindlu. Lapha sinawo cishe konke, eziqala isisekelo sendlu nezindonga, saqeda umhlobiso.
Ukuchitha isikhathi esiningi ukufunda software, ungakwazi ukuklama izakhi ingaphakathi yanoma iluphi nokuba yinkimbinkimbi neminyango, amafasitela, Uphahla lwangaphakathi, izindonga izitebhisi. Ngaphezu kwalokho, ifakiwe izijobelelo akuvumele ukuhlobisa stucco futhi zaveza ekamelweni, futhi izici ezithuthukile ukusiza ukuqaphela zonke imibono eliphezulu futhi isithombe-namaqiniso isithombe ukhiqiza hlelo.
Interior design amakamelo, ngokuvumelana ochwepheshe, kuyoba lula kakhulu uma amukela it up.
Ngokusho eziningi, le software - nje godsend for umklami ngubani wakhulelwa hhayi kuphela ekuthuthukiseni elingaphakathi entsha, kodwa futhi onomqondo ilungiselelo ifenisha. PRO100 - kungcono ingaphakathi Uhlelo design ngesiRashiya, okuyinto kusiza kakhulu umsebenzi kanye nokuthuthukisa nesigcawu umsebenzisi ongenalwazi.
Inzuzo enkulu kuba ukuthi lithathelwe umklami, futhi bebonke izimiso eziyisisekelo ukusebenza kwe-software isakhiwa ulula. Lona amandla futhi umsebenzisi isilinganiso ikhompyutha siqu.
Ukusebenza kohlelo ndawo endaweni ukudala wezangaphakathi. Imenyu top intuitively uguqulwe ube umsizi mobile (amathuluzi elintantayo) ngenkathi umutu abambisene naye emsebenzini. Shintsha indawo amathuluzi nganoma yisiphi isikhathi, futhi izinto ethandwa kakhulu ngokwabo sizochaza uqobo ngaphambili futhi izotholakala kwi ngokuchofoza kuqala.
3D-design software PRO100 ingaphakathi ikuvumela ukusebenza umklamo yanoma yimuphi yinkimbinkimbi. Umsebenzisi ngamunye ngubani Iyakwazi platform okungenani u-60%, angakha izindlu amaphupho akho njengoba kuqanda, futhi umsebenzi uragela phambili msebenzi.
Ukuba khona nje umtapo isifanekiso ocebile ngokuqinisekile ngeke sijabulise hhayi kuphela Wabasaqalayo, kodwa futhi abasebenzisi professional. Amandla ukushintsha izinto ezizenzakalelayo ivumela lokuwaphendula abe jikelele design amathuluzi ungakwazi ukwengeza cishe kunoma iyiphi elingaphakathi.
Iningi abasebenzisi izibuyekezo zabo kakhulu ngokufudumele ngoba PRO100. Abaklami Abangenalwazi ejabulisa abantu beveza wenza Imodi okuzenzakalelayo, okuyinto wenza umsebenzi omningi, futhi abasebenzisi abanolwazi bakhangwa hhayi kuphela khona 3D-inguqulo yephrojekthi, kodwa futhi ithuba bayeke ingaphakathi izinhlelo ezimbili ntathu, kanye nazo zonke izilinganiso zobukhulu kanye namathuluzi tags ethize.
Lolu uhlelo olufakwe kuyi ekahle ukuklanywa amafulethi ingaphakathi, nge yenziwe yaba yasendaweni ngokugcwele kubasebenzisi Russian. Soft ubhekana kahle ngiphele enhle amakamelo futhi ifenisha beveza enquma inkinga.
Ukusebenza kohlelo endaweni - ishidi engenalutho iphepha noma isifanekiso (okuyinto ziningi) kuyothiwa nomsebenzisi. Kalula izigelekeqe akuvumele ngokushesha ukushintsha izimo eziyisisekelo egumbini: ukucacisa ukuma, ucacise ukuvuleka neminyango, amafasitela, ikakhulukazi kophahla nezindonga, futhi kuphela ke uqale ukubhekana nezinkinga ezithile ingaphakathi.
Ukuze ngeso kwaba eduze namaqiniso, ungasebenzisa isethi lelula amathuluzi ukuhlonza ukuthungwa ophahleni, izindonga floor, kanye ezahlukene imibala.
Uhlelo umklamo wezangaphakathi, "Astron Design" has a izixazululo ngomumo eyenziwe ezishumekwe imitapo, ngakho Wabasaqalayo akufanele ube stupor yokudala, inzuzo ukukhetha ngempela kulokho. In the izilungiselelo kwanele, onjani ekamelweni alinikeze, futhi yesikhulumi ngokwayo ngeke ukhethe wena okukhethwa best: imibala, engela / ifenisha iqonde, luphela, umhlobiso ingaphakathi , njll ...
Uhlelo umklamo wezangaphakathi, "Astron Design" ivumela nje kuphela luhlaka luhlaka, ngaphandle emafasiteleni, eminyango kanye ifenisha, kodwa futhi ukuqonda umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. On ukukhetha komsebenzisi amakhethini etholakalayo, imidwebo, amakhethini, iwashi, izimbali, kanye nezinye izinto. Ukukhanya yokusabalalisa sabonakala kuphela ohlangothini omuhle - ngemva 'hang "le Iqhwa, kungenzeka ukulawula ekwindla ka ukukhanya nasethunzini endaweni izifundo.
Lena ngempela uhlelo elinamandla design ingaphakathi nge isikhombikubona multi-umsebenzisi. Ukucinga injini anakekela ukutholakala esiphezulu yesikhulumi ngokunikeza ezintathu izinhlobo zamalayisense:
Isivivinyo samahhala zokwaziswa futhi zemfundo;
elinganiselwe - ukusetshenziswa siqu;
"Zonke esibandakanya" - ochwepheshe.
Ngokusho abasebenzisi, umsebenzi ngohlelo akakubangeli imizwelo engakhi: isibononisi enembile, imenyu lusekelwe amagatsha smart, futhi "izinqamuleli" hhayi yokuqala.
platform Onjiniyela bakwazi ukuxhumana nazo zonke izinhlobo amakhasimende. Umsebenzisi isilinganiso bayokwazisa ukusebenza elula enembile sitfombe lesinotsile imitapo nezisombululo ngomumo eyenziwe, kanye nezifundiswa abakwazi kuphela ekubonile Interiors enemininingwane zingena ezakhiweni, kodwa futhi ukwenza ngeso Ingaphandle kwezakhiwo eziyinkimbinkimbi ezifana amade noma engavamile imidwebo yezakhiwo.
Futhi uzinake ukuthi Isiteji kahle kungase kutholakale ukudalwa imibhalo project, okwakubekelwa ngokuphindaphindiwe waphawula amamaki aphezulu uma kumpendulo yekhasimende. Abaklami laphawula ngokuchichima zokuqeqesha kanye imiyalelo enemininingwane ngokoqobo for element Uhlelo ngalunye.
Abathandwayo futhi okulula ukusetshenziswa kakhulu platform, sibonga ngalo ngisho abangenalwazi kakhulu uthola ithuba abe amakamelo umklami. Lapha ungase unikeze futhi uhlele ifenisha zonke kuphela kungenzeka, hlola inhlanganisela izikali phansi, izindonga nophahla ngaphakathi, kanye lokwenza virtual 3-D uhambo ikhaya okudalwe kabusha.
I Onjiniyela njalo unezela entsha izijobelelo namathuluzi yesikhulumi, kancane kancane zandise izinto ezahlukene isicelo wenzalo yabo.
Bakhuluma ngamacebo "3D House" ikakhulukazi omuhle, kodwa ochwepheshe namanje uthanda neminye imikhiqizo, ngakho le platform sikwazi ukuncoma Wabasaqalayo abaklami ezitolo ezincane ifenisha.
IKEA Ikhaya Planner kanye Apartama
Lawa masevisi yenziwa ezinye izinkampani ezimbili ezihlukene, kodwa zifana kakhulu nomunye. Umsebenzi we isakhiwo elingaphakathi ukudala isitayela sakho siqu endlini ithuluzi ukudayisa izimpahla esitolo, futhi amakhasimende ezengeziwe ikhangwa ngenxa ukukhangisa okungezona awayiphazamisi.
Omunye izici eziyinhloko yesikhulumi - ikhono ukusebenza kwimodi inthanethi. Zonke imitapo obuhambisana hlelo, olusha ngenxa amaseva yenkampani ngesikhathi sangempela, ukuze nje ubeka konke ngebanga lakhe flat inkampani.
Mhlawumbe engokwemvelo isithombe wezithombe lingaphumi, avalele izinkanyezi, kodwa yesikhulumi ngempela okungahambi kahle ngoba jikelele yesehlakalo ingaphakathi. Ngaphezu ifenisha, lapha ungakhetha izakhi Decor, ububanzi textured, isikhundla iminyango namafasitela.
Abasebenzisi ukubuyekeza kwabo bathi inkimbinkimbi software ukusebenza okuyisisekelo lula ukufunda ngaphandle amakhono akhethekile ukuqaliswa kwanoma yikuphi ukuqeqeshwa.
"Avtotyun" - uhlelo ekucubungulweni kwezwi. "Avtotyun": incazelo, izilinganiso umsebenzisi kanye nokubuyekeza